ဖူးနုသစ်: Gtalk ကိုဖွင့်ပါလို့ အပြတ်ကိုတဲ့ Q လိုက်ရင်
အဲဒီနေ့က သူ ရုံးမှာ အတော်ကို ပျင်းနေတယ်။ အရေးတကြီး လုပ်စရာ အလုပ်ကလည်း မရှိ ရုံးမှာ မန်နေဂျာတွေ အတော်များများက အပြင်သွားနေတော့ လုပ်ချင်တာ လုပ်လို့ရနေတယ်။ အင်တာနက်မှာလည်း ကြည့်စရာ ကုန်သလောက် ရှိပြီ။ အဲဒါနဲ့ Gtalkပေါ်မှာ ဟိုသူငယ်ချင်းကို လှမ်းစလိုက် ဒီသူငယ်ချင်းကို လှမ်းစလိုက်နဲ့ အချိန်ဖြုန်းနေရတယ်။
ရုတ်တရက် ဆိုသလို သူ့ Gtalk ထဲကို နာမည်တစ်ခုက လာပေါင်းတယ်။ အိုင်ဒီက ခပ်ရှည်ရှည်ပါပဲ။ သီရိဘာဆိုလဲ မသိဘူး။ နောက်ဆုံးက ၈၃ နဲ့ ဆုံးတယ်။ အင်း အဲဒီတော့ ကောက်ချက်ဆွဲလို့ ရတာက အဲဒီ အိုင်ဒီ ပိုင်ရှင်သည် မိန်းကလေး။ ၈၃ ဆိုတော့ ၂၅ နှစ်ကျော်ပဲ ရှိဦးမယ် ပေါ့။ မဆိုးပါဘူး။ အပျင်းပြေ စကားပြောရတာပေါ့ ဆိုပြီး လက်ခံလိုက်တယ်။
မကြာခင် ဂျီတော့ခ်ထဲမှာ မီးအစိမ်းလင်း လာပြီး ကောင်မလေး တစ်ယောက် ပုံပေါ်လာတယ်။ အားပါး။ အလန် ကလေးပဲ။ မျက်နှာက မြန်မာနိုင်ငံက မော်ဒယ်လ် တွေလိုပုံစံ။ ကြည့်ရတာ သူတော်ကောင်းကလေး တစ်ယောက် ပျင်းနေတာ သိလို့ နတ်ကောင်းများက စကားပြောဖို့ နတ်သမီးကလေး တစ်ပါး လွှတ်လိုက်တယ် ထင်ပါရဲ့။ ထုံးစံအတိုင်း အပြန်အလှန် Hi ကြပြီးတဲ့နောက်မှာ တော့ သူပထမဆုံး ခြေလှမ်းကို စလိုက်တယ်။
နောက်ကြောင်းရာဇဝင် စစ်ဆေးဖို့ပါ။ သူ့သူငယ်ချင်းထဲမှာ မိန်းကလေးနာမည်နဲ့ အခြားသူငယ်ချင်းတွေ ကို လိုက် ပြီး စားတတ်တဲ့သူ နှစ်ယောက် လောက်ရှိတယ်။ သူတို့ ဟုတ်မဟုတ် ဆိုတာ အရင်ဆုံး စုံစမ်းရမှာပေါ့။ တည့်တိုးနဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး မေးခွန်းပါပဲ မေးလိုက်တယ်။ သူ့ အီးမေးလ် လိပ်စာကို ဘယ်က ရသလဲပေါ့။ အဲဒီတော့ ကောင်မလေးက မဆင့် ဖော်ဝပ်လုပ်လိုက်တဲ့ အီးမေးလ်ထဲမှာ တွေ့တာ။ သူက ရန်ကုန်မှာ မဆင့်နဲ့ တစ်ရုံးတည်း အတူတူ အလုပ်လုပ်တာ လို့ ပြန်ပြောတယ်။ အင်း ဒါဆိုရင်တော့ စိတ်ချရသလောက် ရှိပြီ။ သူ့သူငယ်ချင်းတွေ ထဲမှာ သူ့အစ်မဝမ်းကွဲ မဆင့်ကို သိတဲ့သူ အတော်နည်းတယ်။ ဒီကောင်တွေ မဟုတ်လောက်တာ သေချာပါတယ်။
အဲဒီတော့လည်း တတ်သည့်ပညာ မနေသာ ဆိုသလိုပါပဲ။ ကြူ ရတာပေါ့။ အခု ဘာလုပ်နေလဲ ဘာညာကနေ စပြီး သူပြောသမျှ လိုက်နင်းပြီး ပြောရတာပေါ့။ ကောင်မလေး အတော်များများက ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စ မေးခွန်းတွေ မဖြေချင် ကြပါဘူး။ အဲဒီတော့ ကိုယ်ရေးကိုယ်တာ ကိစ္စတွေ ရှောင်ပြီး ကျောင်း အကြောင်း အလုပ်အကြောင်း သူပြောသမျှ နောက်ကနေ Water Follow Fish Follow (ရေလိုက်ငါးလိုက်) လိုက်ပြောရပါတယ်။ သူမက ရန်ကုန်မှာ ကွန်ပြူတာ တက္ကသိုလ်က ကျောင်းပြီးထားတဲ့ အကြောင်း၊ သူ့အစ်မဝမ်းကွဲနဲ့ တစ်ရုံးတည်း အလုပ်လုပ်ရင်း ညနေပိုင်း ကွန်ပြူတာ သင်တန်းတွေ လိုက်တက်နေတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြောပါတယ်။ နောက်လိုက် ပြောင်လိုက်နဲ့ တော်တော် စိုစိုပြည်ပြည်ပါပဲ။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောရတာ အားမရလို့ မြန်မာလို ရိုက်ပြီး ပြောတယ်။ အဲဒီတော့ သူမကလည်း မြန်မာလိုပဲ ရိုက်ပြီး ပြန်ပြောတယ်။
တစ်နာရီလောက် ကြူပြီးတဲ့ နောက်မှာတော့ ကောင်မလေးက သွားစရာရှိတယ် ဘိုင် ဆိုပြီး နှုတ်ဆက် ထွက်သွားပါတယ်။ သူလည်း ခဏ အကြာမှာ ရုံးဆင်းတာနဲ့ အိမ်ပြန်လာခဲ့ပါတယ်။
နောက် ၂ရက် ၃ ရက်လောက်ကြာတော့ သူ အဲဒီကောင်မလေးနဲ့ နောက်တစ်ခေါက် ထပ်တွေ့ပါတယ်။ ကောင်မလေးက အရင်တစ်ခါ လို ဖော်ဖော်ရွေရွေ ပါပဲ။ သူတို့နှစ်ယောက် စကားပြောရတာ ပိုရင်းနှီးသလို ရှိလာပါပြီ။ စကားပြောလို့ ကောင်းနေတုန်းမှာ သူ့ဖုန်းကို မက်ဆေ့ဝင်လာတယ်။ တစ်ခြားသူတော့ မဟုတ်ပါဘူး။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရည်းစားဆီက ဘာလုပ်နေသလဲ မေးတဲ့ မက်ဆေ့မျိုးပါ။ အင်း စကားပြောရတာ အာရုံနောက် သွားတယ်။ အခု အစည်းအဝေးထဲ ရောက်နေတယ်။ နောက်မှ ပြန်ခေါ်လိုက်မယ် ဆိုပြီး မက်ဆေ့ ပြန်ပို့လိုက်တယ်။ အစည်းအဝေးတော့ အစည်းအဝေးပါပဲ။ အွန်လိုင်းမှာ ကောင်မလေး ချောချောကလေး တစ်ယောက်နဲ့ လုပ်နေတဲ့ အစည်းအဝေးပါ။
အဲဒီကောင်မလေး နဲ့ ကြူလို့ အလွန်ကောင်းပါတယ်။ ကောင်မလေးက စင်ကာပူမှာ အလုပ်လာရှာချင်တဲ့ အကြောင်း၊ ဘယ်လို လုပ်ရမှန်း မသိလို့ အကြံပေးပါဦး ဆိုပြီး သူ့ကို မေးပါတယ်။ သူက စင်ကာပူမှာ ဘယ်လို အလုပ်ရှာရတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်း၊ ဘယ်လို အခြေအနေရှိတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းတွေ ပြန်ဖြေပေး လိုက်ပါတယ်။ ပြောစရာမလိုတဲ့ အချက်ကတော့ စင်ကာပူ လာချင်ရင် အားလုံး အကူအညီ ပေးပါ့မယ်ပေါ့။ ကိုယ်ဖိရင်ဖိ စောင်မကြည့်ရှုဖို့ အသင့်ပါ ဆိုတဲ့ သဘောမျိုးပါပဲ။
နောက်တော့ ကောင်မလေးက သူ့ကို မေးလာတယ်။ အစ်ကို့မှာ ရည်းစား ရှိသလားတဲ့။ အင်း ဖြေရတာ အလွန်ခက်တဲ့ မေးခွန်းပါပဲ။ ဒီအရွယ်ကြီးမှ ရည်းစား မရှိဘူး ပြောရင်လည်း အတော်တုံးတဲ့ကောင်ဆိုပြီး ထောပနာ အပြုခံရရင် ဒုက္ခ။ ရည်းစားရှိတယ် ပြောပြန်ရင်လည်း ဂွင်ပိတ်သွားမယ်။ အဲဒီတော့ ရည်းစားတော့ ရှိဖူးတယ်။ အခုတော့ သူနဲ့ ပြတ်သွားလို့ ကိုယ့်မှာ တစ်ယောက်တည်း အဖော်မဲ့ နေပါတယ် ဆိုတဲ့ အကြောင်းကို ကောင်မလေးကို သနားလောက်အောင် ပြောပြ လိုက်ရတယ်။ ကောင်မလေးလည်း သူပြောတဲ့ စကားကို ကြားပြီး သနားသွားတဲ့ ပုံပါပဲ။ အစ်ကိုကြီး မှာ အဲဒီလောက်တောင် ကံဆိုးရလေခြင်း ပေါ့။ ခဏ အကြာမှာတော့ ကောင်မလေးက နှုတ်ဆက်ပြီး ထွက်သွားပါတယ်။ သူ့ မှာတော့ စိတ်လှုပ်ရှားစရာ ဇာတ်လမ်း တစ်ပုဒ်နဲ့ ဟတ်ကော့ကြီး ကျန်နေခဲ့ပါတယ်။
မကြာခင်မှာပဲ တီတီ ဆိုတဲ့ အသံနဲ့ အတူ သူ့ဖုန်းထဲကို မက်ဆေ့ ဝင်လာပြန်ပါတယ်။ ထုံးစံအတိုင်း သူ့ရည်းစားဆီက မက်ဆေ့ပါပဲ။ ရေးထားတာကတော့ ဒီလိုပါ။
“ရှင် ကျွန်မ ကွယ်ရာမှာ ဘယ်လို ခြေလှမ်းတွေ လှမ်းနေသလဲ သိချင်လို့ စုံစမ်းတာ။ သီရိဆိုတာ တစ်ခြားသူ မဟုတ်ဘူး။ ကျွန်မပဲ။ အဲဒီ ဓာတ်ပုံကလည်း မြန်မာနိုင်ငံက မော်ဒယ်လ်တစ်ယောက် ပုံကို Photoshop နဲ့ ပြင်ထားတာ။ အခုတော့ ရှင့်အကြောင်း သိသွားပြီ။ ရှင်ဟာ လူလိမ်ပဲ။ ရည်းစားကြီး ငုတ်တုတ် ရှင့်ဘေးမှာ ရှိရက်နဲ့ ရှင်က မျက်နှာပြောင်ပြောင်နဲ့ လိမ်ရဲတယ်။ ဒီနေ့က စပြီး ရှင်နဲ့ကျွန်မ လုံးဝ အပြတ်ပဲ။ ကျွန်မ ကို နောက်ထပ် မဆက်သွယ်ပါနဲ့။”
သူ့မှာတော့ အဲဒီမက်ဆေ့ကို ဖတ်ပြီး ရီရမလား ငိုရမလား တောင် မသိတော့ပါ။ ဂျီတော့ခ် ထဲမှာ ကိုယ့်ရည်းစားကိုယ် ပြန်ကြူမိတဲ့ အဖြစ်။ သူ့လောက် ဆိုးတဲ့သူ ရှိပါဦးမလား။ အင်း သူကိုယ်တိုင်ကလည်း လွန်တာပါ။ အင်္ဂလိပ်လို ပြောသမျှ ဘန်းစကားက အစ တစ်ခွန်းမကျန် နားလည်နေတာလည်း မရိပ်မိ၊ မြန်မာလို ကျွမ်းကျွမ်းကျင်ကျင် ရိုက်တတ်တာလည်း မရိပ်မိ၊ ပုံမှန်ထက် အလွန်အကျွံ ပိုပြီး လှနေတဲ့ ပုံကို လည်း မရိပ်မိ တစ်ခြား သဲလွန်စတွေကိုလည်း မရိပ်မိ ကိုယ့်ကိုယ်ကို လည်လွန်းတယ် ထင်ပြီး အဲဒီလောက် အတဲ့ကောင် ခံရတာတောင် နည်းသေး ဆိုပြီးတော့ပဲ သူ့ဘာသာသူ အပြစ်တင်မိပါတော့တယ်။
(တိုက်ဆိုင်မှု ရှိလျှင် ခွင့်လွှတ်ပါ။ ဟီးဟီး :D )
Posted by ZT at 2:44 PM
ဖတ်နေရင်း..ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်က ကိုယ်တိုင် တွေ ့ကြုံခဲ့ရတာလေးကိုများ ဇာတ်လမ်းလေးလုပ် ပြန်ရေးထားတာလားဆိုတဲ့အတွေး ဖြစ်သွားတယ်..
(မှတ်ချက် .. ဒီဘလော့ပိုင်ရှင်ကို အပြင်မှာ သိရှိခြင်းမရှိပါ.. )
ဒီနည်းကို မှတ်ထားရမယ်။ဒါပေမယ့်ဒီပို့စ် ကိုသူမြင်လို့တော့မဖြစ်ချေဖူး။
ကောင်းတယ်ဗျာ ... လွတ်ကောင်း။ ဖြစ်တတ်တယ်နော် ဒါမျိုးကတစ်ကယ်။
ဖြစ်ရမယ်လေ ..... ဟား ..ဟား .... ဟား
ဒီလောက် အသေးစိတ် သိနေတာဆိုတော့ ဘလော့ဂ်ပိုင်ရှင် ကိုယ်တိုင် ကြုံခဲ့တာ ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
မရှက်ပါနဲ့ ဘလော့ဂါတွေချည်းပဲဟာ.. အပြင်မှာ တွေ့ဖူးတာ မရှိပါဘူး...။ မျက်နှာကို သပိတ်နဲ့ကွယ်လိုက်ရင် ပြီးပါတယ်...။
သူငယ်ချင်း တစ်ယောက်ခံခဲ့ရတာကို ကိုယ်ပိုင် အတွေ့အကြုံများနှင့် ပေါင်းစပ်ပြီး ဇာတ်လမ်းဆင်ထားခြင်း ဖြစ်ပါသည်။ အဲဒါကြောင့် တိုက်ဆိုင်မှု ရှိရင် ခွင့်လွှတ်ပါ လို့ ဆိုထားတာပါ။ ဟီးဟီး။
မနေ့ကပဲ July Dream က Gtalk shock တင်လို့ ဖတ်ထားတာ... ဟီဟိ..
ရယ်ရတယ်နော်... ကိုယ့်ရည်းစား ပြောလေ့ရှိတဲ့ လေယူလေသိမ်းလေးတော့ မှတ်မိသင့်တာပေါ့....။
ဆင်ဆင်က ဒါမျိုးကျွမ်းကျင်ပုံရတယ် .. ခွိခွိ။
ဖြစ်တတ်ပါသည်... လက်တွေ့တော့ မစမ်းသပ်ရဲပါ..
အဲဒီအဖြစ်မျိုး ကျနော့်အသိတယောက် ကြုံဖူးတယ်။ ပုဂ္ဂိုလ်က မိန်းမကြီး ငုတ်တုတ် ရှိပါလျက်နဲ့ “I feel so lonely” တွေ ဘာတွေ လုပ်နေသေးတာ။ ဟိုဘက်က ကြူနေတာက သူ့ဘော်ဒါ ဘဲတပွေ။ နောက်တော့ ဟိုကောင်က သူ့ကြူချက်တွေကို လျှောက်ဖွတော့မှ ဘော်ဒါတွေအကုန်လုံးကို လျှောက်ရမ်းတော့တာ။
ဒါထက်... ကိုဘွိုင်းဇ်တယောက် အိမ်သာအကြောင်းကို သည်အထိ သယ်လာရသေးတယ်။ း-)
အဲဒီသူငယ်ချင်းကို http://www.kaungkinpyar.co.cc/2009/02/blog-post_05.html အဲဒီ post ဖတ်ခိုင်းလိုက် း)
လွယ်လွန်းလို့ ကိုယ်ကလည်းပြန်လုပ်လိုက်ပေါ့ :D
အင်း... ကိုကိုကတော့ vzo မှာ single လို့ထည့်ထားတာဘဲ။ complaint လုပ်တော့ မိနး်မရှိရင် သူ့ကို ဘယ်သူ့ခေါ်ချင်ပါ့မလဲတဲ့..အင်းလေ..ဒါလည်းဟူတ်တာဘဲ။
I am the regular visitor of your blog. Today,I got one forwarded email of this post. It gives credit to http://toiletwall.ning.com/profiles/blogs/gtalk-q
Date was Feb 7,2009.
This also another Myanmar Theif blogger, Toiletwall!
Apparently the name told the fact.
mmt ရေ။ သတင်းလာပေးတာ ကျေးဇူးပါပဲဗျာ။